လေဆိပ် မှာ ဖမ်းဆီးခံ ခဲ့ရပြီး ပြန်လွှတ်ပေး လိုက်သော်လည်း နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဖြင့် ခီမောင်နှံ ထိန်းသိမ်း ခံထားရ .. – GaMone Media
Homepage / Celebrity / လေဆိပ် မှာ ဖမ်းဆီးခံ ခဲ့ရပြီး ပြန်လွှတ်ပေး လိုက်သော်လည်း နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဖြင့် ခီမောင်နှံ ထိန်းသိမ်း ခံထားရ ..
လေဆိပ် မှာ ဖမ်းဆီးခံ ခဲ့ရပြီး ပြန်လွှတ်ပေး လိုက်သော်လည်း နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဖြင့် ခီမောင်နှံ ထိန်းသိမ်း ခံထားရ ..
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ဇာဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက လေဆိပ်မှာ ဖမ်းသွားခဲ့ပြီး အဲ့နေ့ညနေမှာဘဲ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာပါတယ်နော် ။ ခီမောင်နှံရဲ့ သားလေးရာ မွေးရာပါဦးနှောက် နှေးကွေးတဲ့ ရောဂါ ရှိတာကြောင့် ဒီရောဂါကို ကုသရန် ဘန်ကောက် သို့ သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေစဉ်မှာ အဖမ်းခံ ခဲ့ရတာပါနော်။
သူတို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပေမယ့်လည်း နေအိမ် အကျယ် ချုပ်ဖြင့် ထားရှိ ထားတာပါနော်။ ဇာဏ်ခီကလည်း ဒူးရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေသည်မှာ နှစ်နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့် ရောဂါကုသရန် လိုနေတာပါနော်။ ဇာဏ်ခီတို့ရဲ့သတင်းကို ဒီည ၈ နာရီတွင် စကစရဲ့
ရုပ်သံတစ်ခုမှာ ပါလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်နော် ။ သူတို့ သွားမယ့် ခရီးစဉ် ကို သံသယရှိတာကြောင့် လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်သွားဖို့အတွက် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ထားရှိထားတယ်လို့ ကြေညာသွားပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဇာဏ္ခီနဲ႔ ခရစၥတီးနားခီ ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ေလဆိပ္မွာ ဖမ္းသြားခဲ့ၿပီး အဲ့ေန႔ညေနမွာဘဲ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္တယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္လာပါတယ္ေနာ္ ။ ခီေမာင္ႏွံရဲ႕ သားေလးရာ ေမြးရာပါဦးေႏွာက္ ေႏွးေကြးတဲ့ ေရာဂါ ရွိတာေၾကာင့္ ဒီေရာဂါကို ကုသရန္ ဘန္ေကာက္ သို႔ သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ေနစဥ္မွာ အဖမ္းခံ ခဲ့ရတာပါေနာ္။
သူတို႔ကို ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ေပမယ့္လည္း ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားရွိ ထားတာပါေနာ္။ ဇာဏ္ခီကလည္း ဒူးေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရာဂါကုသရန္ လိုေနတာပါေနာ္။ ဇာဏ္ခီတို႔ရဲ႕သတင္းကို ဒီည ၈ နာရီတြင္ စကစရဲ႕
႐ုပ္သံတစ္ခုမွာ ပါလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္ ။ သူတို႔ သြားမယ့္ ခရီးစဥ္ ကို သံသယရွိတာေၾကာင့္ လိုအပ္တဲ့ စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားဖို႔အတြက္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားရွိထားတယ္လို႔ ေၾကညာသြားပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ….
Previous post အောင်လ နဲ့ BIGDASH ထိုးသတ်မယ့် ပွဲရက် ထွက်ပေါ် လာပြီ … (နောက်ဆုံး ကျန်ရှိနေတဲ့ ခါးပတ် ကို အောင်လ တကယ် ကာကွယ် နိုင်မှာလား ..)
Next post နေ့စဉ် တိုင်း GENXYZ တွေ စုပေါင်းကာ ပုံစံ မျိုးစုံ နဲ့ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ မန္တလေး သပိတ် စစ်ကြောင်း